အရောင်ခမ်းနေတဲ့ အခန်း | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်မော်ဦး ● အလှဆုံးဆည်းဆာကို ပင်လယ်ထဲလွှတ်ချခဲ့ကြတယ်
စိုးနေလင်း ● ကိုယ်တိုင်းကျပ်တဲ့ အရေခွံ
လင်းခါး - ငါလွမ်းတဲ့အကြောင်း
အခရာ ● ညမှားစီးတဲ့ ရထား
မောင်စိုးချိန် - နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ထူထောင်ခဲ့တယ်
မျိုးတေဇာမောင် ● ဒီရက်ပိုင်း မင့်အကြောင်း ငါထပ်တွေးနေမိတယ်
AUNG WAY ● TRIBUTE TO YEVTUSHENKO
ယောဟန်​​အောင် ● မအေးသောင်းတို့ ရပ်ကွက်
လင်းအေးထင် - စူးစမ်းမိတဲ့ ငနုံ
ယောဟန်အောင် ● သူခိုးတွေကြားထဲ ငါပြုတ်ကျတဲ့အခါ
တင်လတ်ကို - ကြွက်ထောင်ချောက်
ခိုင်မာကျော်ဇော - သမိုင်းနီနီ…. ပန်းနီနီ
ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၄
ညွှန်းဆိုထားချက် အလယ်ဗဟို တိတိပပ
ညွှန်းဆိုမှုသက်သက် ထို့ထက်ပိုသော အညွှန်းအရ
လက်သီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် မေးကြော အပြိုင်းအရိုင်း
မျက်မှောင်ကျုံ့ ရှိသမျှသွေးကြောတွေတုန့်ဆိုင်းထားရတဲ့ အခန်း…
တချိန်တခါရဲ့ တစုံတရာကို လွမ်းနေတတ်တယ်
အကြောင်းညီတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုတွေ ခမ်းတယ်
အရင်လို ပန်းဥယျာဉ်နံဘေး လမ်းကလေးတွေကို လွမ်းနေတတ်တယ်…..
သက်မဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တနေကုန်အောင် စကားပြောတယ်
သောတကို ဓာတ်ပြားဟောင်းတွေနံဘေး မေးတင်ထားတယ်
စက္ခုကို အပျက်အတုတွေအနီးတ၀ိုက် ခေါင်းစိုက်ထားတယ်…
သီးခံစောင့်ဆိုင်းရတဲ့ အထီးကျန်ခြင်းအတွက် သီချင်းစပ်နေတတ်တယ်
သောကကို ကျောချဖို့အတွက် ကဗျာရွတ်နေတတ်တယ်
မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို စိမ်းလန်းပေးဖို့ ပန်းချီဆွဲနေတတ်တယ်…..
ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ ပြတင်းတံခါးတွေစိတ်နဲ့ အံကြိတ်ထားရတယ်
အိပ်မွေ့ချခံထားရတဲ့ အမှောင်ထုရဲ့ခန္ဒာနဲ့ အသံပြာနေခဲ့ရတယ်
အစားထိုးကုမရတဲ့ စိတ်ကင်ဆာပေါ်မှာ နာတာရှည်ရောဂါသည်ဖြစ်နေခဲ့တယ်….
ပုံပြောကောင်းသူတယောက်ရဲ့ နားထောင်မကောင်းတဲ့ ပုံပြင်တပုဒ်ရယ်
မျက်လှည့်ဆရာတယောက်ရဲ့ ကြည့်မကောင်းတဲ့ ပြကွက်တကွက်နဲ့
မတရားမှုတွေပေါ်ကို သူ့နေရာနဲ့သူ မတရားအလံထူထားတယ်….
အမှောင်လွှမ်းပြီး အရိပ်မဲ့နေတဲ့အခန်းမှာ အရောင်တွေခမ်းနေတယ်….။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ကဗျာ, ဆောင်းယွန်းလ
မောင်စွမ်းရည်၏ သူငယ်ချင်း တင်မိုး - မိုးမခဆောင်းပါးများ